Izay rehetra heverinay fa fantatray momba ny iOS 8 | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS, iOS 8, iPad, About us
Ny WWDC amin'ity taona ity dia manakaiky kokoa ary mihaino antsika matetika koa ny teny iOS 8 sy izay rehetra misy ifandraisany amin'izany. Fantatry ny rehetra fa hanolotra ireo rafitra fiasa vaovao i Apple amin'ny fihaonamben'ny mpamorona azy amin'ny voalohan'ny volana Jona: na amin'ny birao, OS X 11; toy ny finday, iOS 8. Fa anio kosa dia hifantoka amin'ny zavatra rehetra heverintsika ho fantatsika momba ny iOS 8 sy ireo fiasa rehetra resahina tato ho ato fotsiny isika. Raha tsy misy resaka intsony dia andao ho tonga eo.
1 Tsy hiova tanteraka ny endrika tahaka ny nataon'ny iOS 7
2 Araho maso ny fahasalamana ao amin'ny iOS 8 miaraka amin'ny Healthbook
3 iTunes Radio manerantany ary fampiharana tsy manam-paharoa
4 Game Center? Mendrika izany ny serivisy, fa ny fampiharana azy kosa tsy misy
5 Fampiharana zanatany vaovao: Preview, Tips ary TextEdit
6 Fahafantarana mozika ao amin'ny iOS 8 miaraka amin'ny teknolojia Shazam
7 Fifanarahana amin'ny iWatch, ny zava-misy sa ny foronina?
8 Beta voalohany sy famoahana ofisialy ny iOS 8 avy amin'i Apple
Tsy hiova tanteraka ny endrika tahaka ny nataon'ny iOS 7
Hitanay ny fiovana lehibe teo amin'ny iOS tao amin'ny iOS 7, herintaona lasa izay rehefa novaina ny sary masina fampiharana rehetra, novaina ho tsara kokoa na ho ratsy kokoa ny endrika (na anatiny sy ivelany), miankina amin'ny hevitrao izany. Tena tsy fanovana firafitra firy no antenaina ao amin'ny iOS 8 (na farafaharatsiny tsy betsaka araka izay hitantsika tamin'ny kinovan'ny iOS ankehitriny). Saingy, matokia ianao, ho avy ny fanavaozana rehefa asehon'izy ireo ny OS X 11, izay hiova (na voalaza izany) ho tsara kokoa hitovy amin'ny iOS.
Araho maso ny fahasalamana ao amin'ny iOS 8 miaraka amin'ny Healthbook
Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy dinihina indrindra ao amin'ny iOS 8 dia ny fampifanarahana izay mety hananany amin'ireo fitaovany vaovao toa ny iWatch, izay miaraka amina sensor sasany dia afaka mandrefy ny masontsivana isan-karazany amin'ny fahasalamantsika raha mbola manana isika an-tanana io (mazava ho azy). Iray amin'ireo zavatra atokisantsika indrindra hampisehoana amin'ny iOS 8 ny fampiharana Healthbook, rindranasa iray izay ho tompon'andraikitra amin'ny fitazomana ny baikon'ny data rehetra izay mijery aho na dia tarika marani-tsaina avy amin'ny marika hafa aza.
iTunes Radio manerantany ary fampiharana tsy manam-paharoa
Ny iTunes Radio, serivisy fandefasana mozika an'i Apple, dia tafiditra ao anatin'ny rindran-kira «Music» natiora fa antenaina fa ao amin'ny iOS 8 dia hanana rindrambaiko natokana tanteraka izy io. Izany hoe, ny serivisy iTunes Radio iray manontolo dia ho amin'ny fampiharana hafa. Fa, ho fanampin'izay, antenaina fa ny iTunes Radio miampita ny sisin-tany amerikana hahatratra izao tontolo izao.
Game Center? Mendrika izany ny serivisy, fa ny fampiharana azy kosa tsy misy
Araka ny efa nolazainay taminao tamina fotoana hafa tao amin'ny Actualidad iPad, Game Center dia safidy tsara raha te hihaona amin'ny olona hifaninana amin'izy ireo isika, mamorona profil ahafahantsika mitahiry ny zava-bitantsika rehetra, medaly ary loka hafa avy amin'ny lalao ankafizinay. Fa i Apple dia mety mieritreritra ny hanafoana ilay fampiharana (maso! Ary tsy ny serivisy) izay ananany ao amin'ny iOS. Izany hoe, ny serivisy dia hitohy ho hita ao amin'ny iOS Settings, ohatra, fa amin'ny iOS 8 dia hanjavona ao amin'ny Springboards ny fampiharana.
Fampiharana zanatany vaovao: Preview, Tips ary TextEdit
Ho an'ireo manana Mac dia mety ho fantatrao tsara ireo programa: Preview sy TextEdit. Eny, ireo rindranasa roa ireo dia mety hiseho amin'ny fomba maloto ao amin'ny iOS 8 manampy ireo mpampiasa hahafahany manana topi-maso voalohany amin'ny fisie iOS ary manoratra fehintsoratra kely ary mamolavola azy ireo nefa tsy mila mandoa euro akory. Ho fanampin'izay, ny torolàlana ho an'ny mpampiasa dia hanjavona amin'ny fanomezana làlana ho an'ny fampiharana "Torohevitra" na "Torohevitra", izay hitarika ny mpampiasa ao amin'ny iOS 8.
Fahafantarana mozika ao amin'ny iOS 8 miaraka amin'ny teknolojia Shazam
Andro vitsy lasa izay ny iray amin'ireo mpiara-miasa amiko dia nilaza taminao ny amin'ny mety hisian'izany Nanampy ny teknolojia fankatoavana mozika Shazam ao amin'ny iOS 8 i Apple ary tena iriko izany teratany. Izany hoe amin'ny alàlan'ny (siri?) Fampiharana teratany toa ny Music hahafahantsika mamantatra izay hira tadiavintsika nefa tsy mila maka an'i Shazam ao amin'ny App Store.
Fifanarahana amin'ny iWatch, ny zava-misy sa ny foronina?
Ny zavatra iray hafa mahatonga ny fahatezerana mafy indrindra eo amin'ny mpamorona sasany dia ny fahafahan'ny Apple manolotra ny famantaranandrony ao amin'ny WWDC, ny iWatch, izay miteraka fampifanarahana tanteraka amin'ny iOS 8 amin'ny alàlan'ny Healthbook. Moa ve isika manatrika ny fahatongavan'ny Apple smartwatch miaraka amin'ny fampifanarahana / fampidirana tanteraka amin'ny iOS 8?
Beta voalohany sy famoahana ofisialy ny iOS 8 avy amin'i Apple
Vinavinaina fa ny iOS 8 dia haseho amin'ny WWDC amin'ity taona ity, amin'ny volana Jona ary ny beta voalohany dia hivoaka amin'ireo andro ireo ihany, ny famoahana ofisialy ho an'ny tsirairay mba hankafizany ny tombotsoan'ny iOS 8 dia manodidina ny fararano, eo akaikin'ny fampisehoana ofisialy ny iPhone manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Izay rehetra heverinay fa fantatray momba ny iOS 8
Nanazava ny antony tsy niasan'ny FaceTime tamin'ny fitaovana sasany ny FaceTime
Sonic & All-Stars Racing Transformed dia maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra